Hope Ithemba uGrace Tarot | Iinkonzo kunye neengozi | Izimvo 2019
Omnye wabantu abanempembelelo enkulu kwi el mundo I-esotericism, edume ngokubonakala mihla le kumabonwakude, lelo libhinqa le-horoscope yeTelecinco. Sithetha ngo-Esparanza Gracia, osebenza njenge-tarot reader kunye nemboni, kodwa eyaziwayo kwihlabathi likamabonwakude ngekamva.
1 Izimvo ze-Esperanza Gracia tarot
2 Iinkonzo zekhadi lika-Esperanza Gracia
3 Umthengi weClairvoyance ye-Esperanza Gracia
Izimvo ze-Esperanza Gracia tarot
Ukuba ulapha kungenxa yokuba unomdla wokwazi ezona zimvo zika-Esperanza, yiyo loo nto njengeengcali kweli candelo, siza kutyhila zombini izimvo ezilungileyo kunye nezimvo ezimbi, zombini njengemboni, kunye nekhabhinethi yakhe.
Iinkonzo zekhadi lika-Esperanza Gracia
Ukongeza ekubeni nobukho obuhle kwiinethiwekhi zentlalo, ezinje nge-Instagram kunye nejelo lakhe le-YouTube, uyaziwa ngokuba nabaphulaphuli abalungileyo kumabonwakude, ukufikelela kubuqaqawuli nodumo olwenza ukuba wonke umntu amazi.
U-Esperanza, ubabalo, akafuni kuthandwa, ke ukuba iileta zimxelela iindaba ezimnandi okanye ezimbi, uya kuhlala ekuxelela inyani.
Idlulisa i-halo yamandla e-cosmic aguqulela kukhuseleko kunye nokuzithemba.
Xa ephosa iileta zakhe kubabukeli, akenzi ufundisiso olusisiseko lokukholisa, kodwa endaweni yoko uyaqhubeka. Kungoko impumelelo yekhabinethi yakhe.
Inqanaba lokuphumelela lokuthembeka kwe-95%.
Ukongeza kokufunda ikamva ngempumelelo enkulu, uyakumangaliswa kukukwazi ukubona ixesha lakho elidlulileyo ngaphandle kokuba uthethe nantoni na.
Kuthethwano lwezempilo, bonisa ubuchwephesha kunye nokunyaniseka, into ekufuneka ifundwe zezinye ii-psychics.
Umsebenzi wakhe wangoku asingomfundi we-tarot, okanye imboni, okanye ugqirha wekamva, ukuba akunjalo, uyathanda ukuzibiza ngokuba yiNkwenkwezi, usebenzisa i-cosmos kunye nokuvumisa ngeenkwenkwezi ukuze azincede ngengqikelelo yakhe.
Ulunge kakhulu kubalandeli bakhe abathembekileyo, kwaye uyanxibelelana nabo kwimidiya yoluntu.
Ikwanazo neencwadi ezininzi, kubandakanya "Zincede ngomlingo omhlophe" kunye "neenkwenkwezi zakho nothando."
Ixabiso le-Esperanza Gracia liyahluka ngokuxhomekeka ekubeni uthetha naye ixesha elingakanani. Ewe, ukuba uya ngaphezulu kwemizuzu eli-15, ihlala ibiza kakhulu kunezinye iinkonzo ezingaziwayo.
Umthengi weClairvoyance ye-Esperanza Gracia
Masibone ezinye zeengozi malunga nokusebenza kwekhadi lakhe kunye neembono zakhe:
Ngamanye amaxesha kwiincoko zomnxeba ukhupha umxholo ukwenza umthengi achithe ixesha elininzi emnxebeni.
Ukufundwa kwamakhadi kwenziwa kuphela kwifowuni, ungaze ube ngumntu.
Xa umtsalela umnxeba ukuba eze kuwe, abanye abafundi be-tarot abamsebenzelayo bahlala bephendula, kunqabile ukuba uthethe naye.
Ufumene ukugxekwa ngenxa yamasiko akhe ngoku adumileyo kunye namakhubalo, efumana izimvo ezininzi ezimbi.